Warbixin: Heerka Maalgashiga Hantida Maguurtada Ah Ee Muqdisho
Maalgashiga Hantiga Ma guurtada ah waa mid kamid ah hababka wax lagu maalgashto marka laga soo tago suuqyada saamiyadaha, waxa uuna soo if-baxay nidaamkan sanado badan ka hor isaga oo noqday mid dunida inteeda kale ku baahsan oo faa’iidooyin badan laga sameeyo.
Marka aad maqasho ‘real state’ ama ‘hanti Maguurto ah’ waxa ugu weyn ee durbaba maskaxdaada ku soo dhacaya waa Guryo, Inkasta oo guryahu ay yihiin qeybaha ugu muhiimsan ee maalgsahiga marka laga fiiriyo waaritaanka iyo nafciga hadane waxaa jira qeybo kale oo hantida maguurtada kamid ah sida in la maalgeliyo goob ka baaxad weyn guryaha caadiga ah una dhiganta guryo leysku daray si ay usii iibsadaan dadka aan rabin in ay guri gataan kadibna ay dhistaan.
Hadaba waa side heerka maalgashiga guryeynta iyo hantida maguurtada ah ee magaalada Muqdisho.
Wixii ka dambeeyay sanadkii 2012 Soomaaliya waxaa ku soo badanayay maalgelinta hantida maguurtada ah iyada oo ganacsato badan ay bilaabeen in ay lacag fara-badan geliyaan guryaha iyo hantida maguurtada ah. Waxaana meelaha ugu badan ee maalgashiyadaas laga sameeyay kamid ah magaalada Muqdisho.
Xaafadaha iyo guryaha cusub ee magaalada Muqdisho laga hirgaliyay waxaa kamid ah Xaafada Daarusalaam, Safari Village iyo dhismayaal ganacsi oo waaweyn sida hoteello, moolal iyo guryo kale oo si casri ah loo dhisay kuwaas oo door muhiim ah ka ciyaaraya ganacsiyada sida gaarka ah loo leeyahay. Waxaana xusid mudan in ay ka qeyb-qaateen yareynta shaqo la’aanta baahsan ee dalka ka jirta.
Xaafadda Darusalam ayaa kamid ah goobahii ugu horreeyay ee loo maalgaliyay qaab deegaan ah si dadka guryaha u baahan ay u kireystaan ama u iibsadaan. Waxaana mashruucaas dhismahiisa fuliyay Shirkadda Salaam Properties oo kaashaneysa Salaam Somali Bank.
Fu’aad Axmed Warsame oo ah maalulaha qeybta suuq geynta ee Salaam Properties ayaa Goobjoog Business u sheegay waxa ku dhaliyay dhismaha Xaafada Darusalaam in aytahay in arkeen baahi deegaan iyo ciriiri ka jira magaalada caasimada ah ee Muqdisho. Waxaa kale oo uu intaasi ku daray in ay sameeyeen cilmi baaris ku saabsan baahida loo qabo deegaan cusub inta aysan dhisin ka hor xaafadda daarusalaam.
Mr. Fuaad Axmed Warsame ayaa intaasi ku sii daray in aysan jirin wax caqabad ah oo horyaalla ganacsatada rabta in ay maalgeshato hantida maguurtida ah haddii ay haystaan hanta ku filan maalgashigooda.
Waxaa kale oo jira goobo aad u qurux badan oo looga tiro-galay in qoysaska, ehelka iyo asxaabta ay ku kulmaan. Waxaana lagu maalgeliyay hanti aad u fara badan. Ganacsatada goobahaas furatayna waxaa ka muuqata in ay ku qanacsanyihiin natiijada maalgashigooda.
Maal gashiga hantida maguurtada ah waxa uu kamid yahay hababka maalgashi ee ay yartahay qasaaraha lagala kulmo maalgelintooda, waxaana sidoo kale fudud in lacag fara badan laga sameeyo. Cabdikariiin Cabdullaahi Aadan oo bartay Culuumta Dhaqaalaha ayaa ku doodaya sida tan “Qofka maalgeshta hantida maguurtada ah sida dhulka, dhulka ma raqiiso mana lagu qasaaro. Haddii aad dhul iibsato maanta 3 sano kadib waxaa la hubaa in uu qiimahaas ka sareynayo. Waxaa intaa sii dheer qofka isaga ayaa ka faaideysan kara hantida ma guurtada ah ama cid kale ayuu ka kireyn karaa”
Si kastaba, maalgashiga Hantida Maguurtada ah ayaa sanadahii ugu dambeeyay kobac badan sameynayay. Waxaana la arkaa in sanadba sanadka ka dambeeya ay sii kordhayaan iyada oo arrintaasi loo sababeynayo Soomaalidii qurbaha oo dalka kusoo laabanaya iyo xaalada dhaqaale ee wadanka oo soo kabanaya.